Sayensi Amachiza aBaziwayo
I-Linus Pauling - I-Winner yeeNqununu ezimbini zeNobel
I-Linus Carl Pauling (ngoFebruwari 28, 1901-Agasti 19, 1994) nguye kuphela owamkela iiNobel ezimbini ze-Nobel ezingekho phantsi kwe- Chemistry ngo-1954 kunye noXolo ngo-1962 . Ukupapashwa kukaPaul ngaphezu kwe-1200 neepapu kwiintlobo ezahlukeneyo zezihloko, kodwa ziyaziwa kakhulu ngomsebenzi wakhe kwimimandla yechemum chemistry kunye ne-biochemistry.
ULinus Pauling wayengumntwana omdala kaHerman Henry William Pauling noLucy Isabelle Darling.
Ngowe-1904, intsapho yafudukela e-Oswego, eOrgeon, apho uHerman wavula khona izidakamizwa. Ngomnyaka we-1905, intsapho kaPawulos yafudukela kwiCondon, e-Oregon. UHerman Pauling wafa ngo-1910 wesilonda esisisigxina, eshiya uLucy ukuba anakekele uLinus noodadewabo uLucile noPauline.
U-Pauling wayenomhlobo (uLloyd Jeffress, owaba ngumsululwazi we-acoustic kunye no-psychological professor) owayenekiti ye-chemistry. ULinus wabonisa ukuba unomdla wokuba yikhemistri kwiimvavanyo zokuqala uJeffress wenza xa abafana bebini bobabili. Ngeminyaka eyi-15 ubudala, uLinus wangena kwi-Oregon Agricultural College (ekugqibeleni waba yiYunivesithi yase-Oregon State), kodwa wayenayo imfuneko yeembali kwidiploma yesikolo esiphakeme . ISikolweni sePhakamileyo saseWashington sanikezela uPaul u-diploma esikolweni esiphakeme iminyaka engama-45 kamva, emva kokuwina umvuzo weNobel. Xa uPawulos esebenza ekholejini ukuze ancede uncede unina. Wadibana nexesha lakhe elizayo, uAva Helen Miller, ngelixa esebenza njengomncedisi wokufundisa kwiklasi yezokhemikhali zezoqoqosho.
Ngomnyaka we-1922, uPaul wathweswa iziqu e-Oregon yeKholeji yezoLimo ngeCandelo lobunjineli bemichiza . Wabhalisa njengomfundi ophumelele kwiCalifornia Institute of Technology, ufunde uhlalutyo lwesakhiwo se-crystal usebenzisa i- X-ray diffraction phantsi kukaRichard Tolman noRoscoe Dickinson. Ngowe-1925, wathola iF.D.
kwi-chemistry yemvelo kunye ne-physics ye-mathematical, i- summa cum laude . Ngowe-1926, xa uPawulos ehamba eYurophu phantsi kweGuggenheim Fellowship, ukufundelwa phantsi kweengcali ze-physics u- Erwin Schrödinger , uArnold Sommerfeld kunye noNiels Bohr .
Ukufunda nokufundiswa kwimihlaba emininzi, kuquka i-chemistry, i-metallurgy, i-mineralogy, iyeza kunye nezopolitiko.
Wasebenzisa i-quantum mechanics ukuchaza ukubunjwa kweebhondi zamakhemikhali . Wabeka isilinganiselo sokukhetha ubukhulu bombuso ukuqikelela ukuxhasana kunye ne-ionic . Ukucacisa ukudibanisa ngokukhawuleza, wacebisa ukuxhaswa kwamabhondi kunye ne-bond-orbital hybridation .
Ekupheleni kweminyaka emithathu yokusebenza kukaPaul ngokubhekiselele kwimpilo kunye ne-physiology. Ngomnyaka we-1934, wahlola iimpawu ze-hemoglobin kunye nendlela i-antigens kunye ne-antibodies ezisebenza ngayo. Ngomnyaka we-1940 ucebise "imodeli yesigxina" sokuzaliswa kwee molecule, engayisebenzisanga kuphela kwi-serology, kodwa ibuye isetyenziswe indlela ye-Watson kunye neCrick yokuchaza isakhiwo seDNA. Wachaza i-anemia ye-sickle cell njengesifo se-molecular, esenza ukuba uphando lwe-genome yabantu.
KwiMfazwe Yehlabathi II, uPaul wasungula iindawo zokuthungela i-missile kunye ne-explosive name linite. Wakhela i-plasma yegazi eyenziwe ngokusetyenziswa kwebala.
Waqulunqa imitha ye-oksijini ukujonga umgangatho womoya kwiiplani kunye nakwi-submarines eyasetyenziswa emva koko ukuba i-surgery ne-infant incubators. U-Pauling wachaza i-theory ye-molecular ukuba i-anesthesia jikelele isebenza njani.
UPauling wayengumdlali ochasayo kwiimvavanyo zenyukliya kunye neengalo. Oku kukhokelela ekukhutshweni kwepasipoti yakhe, njengoko uhambo lwamazwe ngamazwe lubonwa yiSebe likaRhulumente ukuba "lingenalo inzuzo ye-United States." Ipasipoti yakhe yabuyiselwa xa iphumelele i-Nobel Prize eKemistry.
Ngo-1954 iNobel Prize eChemistry, iRoyal Swedish Academy yeSayensi yayicacisa umsebenzi kaPaul on the nature of bonding chemicals, izifundo zakhe zesakhiwo seekristal kunye nama-molecule, kunye nenkcazo yeprotheni isakhiwo (ngokukodwa i-alpha helix). Xa uPawulos wayesebenzisa udumo lwakhe njengelungelo lokuqhubela phambili ekusebenziseni intlalo yoluntu.
Wasebenzisa idatha yesayensi ukuze achaze ukuba ukuwa kwe-radioactive kuzakunyusa njani umdlavuza kunye namazinga okukhubazeka okuzalwa. Ngo-Oktobha 10, 1963 kwakuyimini yokuvakaliswa kweLinus Pauling iya kunikwa iSikhwama soxolo se-Nobel sika-1962 kunye nomhla wokuvavanywa okuncinane kwinqwelo yezixhobo zenuzi (US, USSR, Great Britain) yaqala ukusebenza.
ULinus Pauling wafumana iintlonelo ezininzi kunye namabhaso kulo lonke umsebenzi wakhe obalaseleyo. Phakathi kwezona zibalaseleyo:
1931 - I-Irving Langmuir Award
1947 - i-Davy Medal
1954 - iNobel Prize kwiKhemistry
Ngo-1962 - iNdel Peace Prize
Ngowe-1967 - iMedal Medal
1968-69 - I-Lenin Peace Prize
Ngo-1974 - iMedali yeSizwe yeSayensi
Ngowe-1977 - iModosov Gold Medal
1979 - I-AAS Award kwi-Chemical Sciences
1984 - iMedestley Medal
1989 - I-Vannevar Bush Award
U-Pauling wabulawa ekhaya lakhe e-Big Sur, eCrazil yase-California ye-prostate yomdlavuza eneminyaka eyi-93 ngo-Agasti 19, 1994. Nangona ummangcwaba wamangcwaba wabekwa eMangcwabeni yeMangcwaba eLake Oswego Oregon, umlotha wakhe nomfazi wakhe abazange bangcwatywa khona ngo-2005 .
ULinus noLucy babenabantwana abane: uLinus Jr., uPeter, uLinda noCrellin. Babeneenzukulwana ezili-15 kunye nabazukulu abangama-19.
I-Linus Pauling ikhunjulwa ngokuthi "uyise we-molecular biology" kunye nomnye wabasunguli bemithi yamanzi. Iingcamango zakhe zokhetho lwe-electronegativity kunye ne-electron hybridization ze-electron zifundiswa kwi-chemistry yanamhlanje.
Ngubani owayengumKhemistri wokuqala?
UWilliam Gregor Biography
U-Alexandre-Emile Béguyer de Chancourtois Biography
Biography kaErnest Rutherford
Imifanekiso yabasetyhini eKhemistry
Funda ngeKota yeGramatic 'I-Logophile'
Yiyiphi isibheno kwiRhetoric?
IRiphablikhi yaseRoma yexesha
Ngaba abaFundi beKholeji abafuna Isenzo sokuQinisekisa ukuThola?
I-Admissions yeeKholeji yaseSt
I-Top 10 R & B Hits of 1950
Ixesha lokuqwalasela ukuPhulwa kweFattsburgh Steelers uMqeqeshi uMike Tomlin?
Iyini iGasi Elikhulu Kwimimandla Yomhlaba?
Kutheni ufumana i-MBA?
Umthetho omnye woMdlalo udlala iCandelo leDrama
Iintlobo ezidumileyo zoDaniso
IsiFrentshi IsiNgisi IsiNgesi: Iimpawu ezingabonakaliyo